इन्टरनेटमा भाइरल भएकी यी सुन्दरी जसको फिगरले तान्यो संसारको ध्यान, को हुन यी सुन्दरी ? (फोटो फिचर) – Taja Khawar
इन्टरनेटमा भाइरल भएकी यी सुन्दरी जसको फिगरले तान्यो संसारको ध्यान, को हुन यी सुन्दरी ? (फोटो फिचर)
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २८, २०७८ समय: २:१८:०२
तहलियाले निकै कम उमेरमै फिटनेस प्रशिक्षण दिन शुरु गरेकी हुन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार तहलियाले चर्चित सेलिब्रेटीलाई समेत प्रशिक्षण दिइसकेकी छिन्।तहलिया सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । इन्स्टाग्राममा शेयर गरिएका फोटोका कारण उनी सधैं चर्चाको विषय बनिरहन्छिन् । हेर्नुहोस तस्विरहरु
Last Updated on: July 12th, 2021 at 2:18 am